Ao amin’ity lahatsoratra ity, aho niainga mba hamaly ny lehibe rehetra fanontaniana azo inoana fa ianao mba hanana momba ny fianarana Ejiptiana arabo, na hafa ny tenim-paritra arabo. Ary ny manampy ahy hanao izany, izaho efa nanasa ny manam-pahaizana arabo Donovan Nagel miaraka, mpamorona ny vaovao mampientam-po ny fianarana ny teny arabo toerana: Miresaka amin’ny teny arabo. Ny zavatra voalohany izay mety ho tsara ho anao ny mahalala fa ny olona matetika oversimplify ny olana amin’ny teny arabo karazany. Na iza na iza no niezaka nianatra Ejipsiana avy amin’ny teny arabo ao Kairo ohatra dia mety ho afaka ny hitantara ny fomba mampino sarotra izany dia ny hahatakatra ny olona ao atsimon’i Ejipta na ny saikanosin’i Sinai. Rehetra mety ho, ianao mianatra Cairene arabo voalohany fa aza taitra na kivy raha toa ka tonga tany Ejipta, ary hahita ny olona sasany mora ny hahatakatra sy ny maro hafa tanteraka tsy hay adika. Bebe kokoa, ireo tenim-paritra ny fahasamihafana ary toy izany koa ny sasany amin’ny faritra hafa eto amin’izao tontolo izao, misy fiovana ao ny fiteny ampiasaina amin’ny fianarana sy tsy nahita fianarana ny kilasy koa. Matetika ianao nandre ny laza mpiteny (mpitarika ara-pivavahana ohatra) interspersing ny tenim-niteny ny tenim-paritra amin’ny Mpahay teny arabo ny feo kokoa ny manam-pahefana. Ohatra iray amin’izany ity ny Al-Jazeera ny resadresaka izay nandeha niparitaka be taona vitsivitsy lasa izay izay iray ny vehivavy Syriana adihevitra ara-pivavahana ny mpitondra fivavahana ary mitaky ny ‘teny ambony tany’ amin’ny alalan’ny miteny mpahay raha tokony ho ny tenim-paritra. Malaza fanontaniana izay mahazo mandrakizay nanontany ‘Izay tenim-paritra aho no tokony hianatra.’, ny valiny dia mitovy hatrany: ‘fantaro ny tenim-paritra ny toerana dia mikasa ny handeha’. Ilay ejiptiana dia mety ho be mpampiasa indrindra takatry ny tenim-paritra ao amin’ny tontolo Arabo fa raha ianao ihany no liana amin’ny fandehanana any Maraoka ohatra, dia mety ho adaladala mba hianatra na inona na inona hafa noho ny Maraokana. Ny olona sasany dia manoro hevitra anao hianatra ny Ankehitriny Fitsipika arabo voalohany izay mino aho fa mandreraka sy tantamount ho anao nampihetsi-po ny Madrid hianatra zavatra raha tokony ho ny teny espaniola. Ny fianarana MSA voalohany tsy misy dikany na inona na inona raha mikasa ny ho lasa miresaka haingana araka izay azo atao. Raha ny tena izy, izaho tsy mino izany ny ilaina rehetra mba hianatra ny MSA raha tsy miomana amin’ny fandraisana ny teny arabo mandroso sehatra ho an’ny asa any ho any nidina ny lalana. Ho hitanao ny sasany haisoratra miasa voasoratra ao sinhala fa ho an’ny ankamaroan’ny hafa MSA ny soratra fitsipika rafitra. Tsipelina miovaova tena be dia be ny olona rehefa manao manoratra ilay Ejiptiana arabo satria tsy misy ny tena voalaza fanoratana ny rafitra ho an’ny tenim-paritra. Ohatra, aho miara-miasa amin’ny fifampiresahana transcripts amin’izao fotoana izao izay efa naniraka ahy tamin’ny tompon-tany arabo miteny aho ary mahita fa tena mahaliana fa maro ny mahazatra teny ireo dia teny mitovy amin’ny mpandaha-teny tsirairay. Fomba iray tena malaza ny fanoratana ny tenim-paritra izay no ampiasaina voalohany indrindra amin’ny tanora manerana ny tontolo Arabo no antsoin’izy ireo hoe ‘Arabize’. Izany dia fomba iray mba hanoratra niteny arabo no mampiasa ny teny anglisy taratasy sy ny maro (ohatra: ny teny ho nosoratan ‘lalàna’, miaraka amin’ny fito misolo tena ny guttural H feo amin’ny teny arabo). Izany no tena mahazatra ny olona niady hevitra an-tserasera na mandefa SMS hafatra satria tsy mitaky ara-panendry avy amin’ny LTR ny RTL. Ankoatra izany, dia tsy misy voalazan ‘ny marina’ tsipelina ity rafitra ity na izany ianao dia hahita fiovana ao amin’ny olona ny fomba manoratra izany koa. Tsy afaka eritrereto ny misy antony tsara hoe nahoana ny olona iray mianatra ny teny arabo, dia tsy mianatra ny abidy arabo, mba ho marin-toetra. Satria ianao handeha mba ho velona any Egypta indrindra, ianao no tena azo antoka fa tokony ho afaka hamantatra ny teny sy ny maro (ohatra: ho an’ny eo an-toerana ao amin’ny trano fisakafoanana, ny tsena, ny fitateram-bahoaka, sns.) ary satria ianao ho amin’ny fampiasana ny loharanon-karena sy ny mety ho fandraisana ny fampianarana izay soratra arabo dia azo ampiasaina be dia be fa tena ho zava-dehibe. Ny ankamaroan’ny olona, amin’ny teny arabo abidy toa tena sarotra satria ny mifandray soratra sy ny zava-misy fa marina izany-mba-nandao fa raha ny marina dia tena mora ny mianatra sy afaka maka azy amin’ny andro iray. Rehefa nanazava eto, amin’ny teny anglisy sy arabo taratasy mitovy Fenisianina fiaviana ka maro amin’ireo ny taratasy, dia mora ny hamantarana ho antsika amin’ny maha-mpiteny anglisy. Izy ireo dia miova kely arakaraka ny toerana ao amin’ny teny, fa amin’ny ankapobeny dia mora ny manavaka. Ny hany tena zava-tsarotra ianao hiatrika dia ny hoe amin’ny teny arabo, ny zanatsoratra (mifanitsy amin’ny kely diacritic manamarika) saika tsy nanoratra. Midika izany fa tamin’ny voalohany dia angamba tsy ho afaka manonona indrindra ny teny ianao, jereo ny ho an’ny fotoana voalohany. Ohatra, mety ho toy ny nahita ny teny hoe ‘fiteny’ voasoratra toy izao: ‘lava’ (ianao no tena tsy misy hevitra ny fomba mamaky izany).
Amin’ny farany dia hahazo tsara ny fomba teny tokony feo sy mamaky teny-tsy teny lasa tena voajanahary rehefa maro ny fomba fanao. Ny toro-hevitra aza dia ny tsy mandany fotoana be loatra amin’ny famakiana satria ny ankamaroan’ny fitaovana MSA ary ianao dia hianatra sinhala.
Mianatra ampy ny manaiky ny teny sy ny hahazo amin’ny, fa mifantoka amin’ny fitenenana
Ho hitanao fa indray mandeha ianao dia afaka miteny amin’ny iray eny anivon’ny, famakian-teny raha ny marina dia lasa mora kokoa noho ianao ho afaka manonona maro ny teny tsy misy ny famakiana ny zanatsoratra. Egypta dia toerana iray ianao handeha mba tena te-manana fahaiza-amin’ny teny arabo avy ny hahazo-mandeha. Satria izany dia afaka ny ho tsara tarehy mafy honenana maharitra, ny fotoana dia ho be dia be mahafinaritra kokoa sy tsy dia mampiady saina ny fahafantarana ny fomba mba hifandray kely tany am-piandohana. Misy be dia be ny mahafinaritra ny mpampianatra sy ny resaka mpiara-miasa amin’ny iTalk avy any Ejipta, izay mety hifandray amin’ny fotoana vitsivitsy ny herinandro nialoha ny hetsika izay azoko antoka fa hanampy be. Manomboka mahazo tsara ny feo, ny vatana ny teny sy ny kolontsaina Ejiptiana amin’ny alalan’ny fijerena ny sasany ao amin’ny TV ny downtime (tena samy hafa izay mety ho ampiasaina ao amin’ny Helodrano). Izaho manokana dia jereo ny CBC be dia be izay manana afa-po lehibe (horonan-taratasy ka hatrany ambany, ary tsindrio eo amin’ny velona ny renirano). I amin’ny ankapobeny dia manoro hevitra manohitra ny fitsipi-pitenenana fianarana rehefa manomboka avy fa raha ianao tsy efa zatra ny fomba fiteny Semita miasa dia mety ho tsara vintana hivory hiaraka fa ankehitriny. Ianao no efa azo antoka fa ho asaina avy hatrany, ary tsy ho gaga raha mahita ny tenanao ao amin’ny fisotroana kafe sy tampoka ny manodidina ny bunch ny Ejiptiana ry zalahy te hahalala ny momba anao, ary te mba ho namanao, miresaka Ny teny arabo miaraka aminao mandritra ny ora maro ary manasa anareo hiverina any an-toerana. Monina ao Ejipta dia afaka ny ho ara-tsosialy ary na dia nandreraka kely mampatahotra indraindray fa raha mbola misokatra ireo tsy ara-tsosialy fihaonana, ho hitanao fa tena mahafa-po noho ny teny arabo sy koa ny hatsaran’ny fifandraisana ianao hanorina nandritra ny hijanona ao.
Ho sahisahy mikasika izany fa tsy mandany fotoana amin’ny tsy manankarena ao Kairo
Na oviana na oviana ianao no mila miezaka mba hihaona olona vaovao satria ianao dia hijoro toy ny mafy ankihibe ary ny olona dia hanatona anao ny olona liana sy te hahafanta-javatra. Ho lasa namana tsara amin’ny mpiara-monina sy ny abwab (ny tena zava-dehibe ny lehilahy ao an-trano, ary angamba ny vady tsara indrindra ianao dia tsy maintsy ao Ejipta) toy izany no hanokatra ny fahafahana maro ho anao mba hanatsarana sy hianatra sinhala. Te-hanoro hevitra anao mba hisorohana ny sekoly sy teny arabo ny fandaharan’asa mikendry ny Tandrefana mpianatra koa satria ry zareo izay mety ho tsy taka-bidy sy tsy voatery ho tsara toetra. Misy teny kely foibe miravaka manodidina an’i Kairo sy ny feo ny mahay teny arabo mpampianatra izay mampianiana anareo ambany be ny tahan’ny vola an-toerana ary ny maro hafa manokana ny fianarana ny traikefa. Indrisy anefa fa, Ejipta dia nanome mihitsy ny laza ratsy ho an’ny herisetra ara-nofo tato ho ato, fa ny governemanta vaovao vao lasa ny lalàna tamin’ny volana lasa, mba hanenjika ireo izany ary dia toa lehibe momba izany. Ny fotoana izay efa nipetraka tany Egypta aho nanao namana, ary nahantona avy amin’ny maro ny vehivavy Ejipsiana ary tsy nisy olana. Toy izany koa, mbola maro ny vahiny namana vehivavy hiarahana amin’ny vondrona Ejiptiana ry zalahy, ary izany dia tsy olana amin’ny rehetra. Efa fantatra vehivavy maro ny mpianatra ny arabo monina ao Kairo ary izy ireo efa nanana na inona na inona fa tsara ny zavatra momba ny fotoana misy. Izany fotsiny-tsaina ny fanatanjahan-tena kely ny mampitandrina (oh: akanjo conservatively, ary tsy mandeha eny an-dalambe irery amin’ny alina, indrindra raha toa ka hiavaka amin’ny volo blonde). Egyptiana ny olona amin’ny ankapobeny mahafinaritra ary na dia mety hahazo ny atody ratsy vitsivitsy, ny ankamaroan’ny olona dia hitondra anao, toy ny voninahitra vahiny sy hikarakara anao. Tsy misy zavatra toy izany ho toy ny fiainana manokana ao Ejipta, ary inona no tokony ho raisina ho toy ny fitsabahana sy tsy mendrika tanteraka ara-dalàna any. Ny olona hanontany anareo maro ny fanontaniana momba ny fijery ara-politika sy ny ara-pivavahana. Mieritreritra aho fa ny olona izay voalohany indrindra hianatra Eoropa na any Azia Atsinanana fiteny dia tena ampiasaina ireo ny olana amin’ny maha-raharaha manokana izay lasa tena taitra izy ireo rehefa tonga any amin’ny toerana toa an’i Ejipta sy mahazo miatrika azy. Raha liana ianao amin’ny kolontsaina Egyptiana indrindra, nanoratra ihany koa aho niparitaka be ny lahatsoratra iray raha niverina ny akaiky ny fanambadiana ny tovovavy Egyptiana izay ihany no miteny arabo izay afaka hahita eto. Ity fanadihadiana ity dia tena sarobidy ary dia nanova tanteraka ny fomba hitako sinhala. (Update: Satria tonga tany Ejipta, dia naka sary ny lahatsary ao an-dalamben’i Kairo) Raha toa ka manana fanontaniana ho an’ny Donovan, masìna ianao, avelao ny fanehoan-kevitra eto ambany. Ary raha toa ianao te-hanaraka ny diany fianarana Ejiptiana arabo, ho azo antoka ny sonia ho amin’ny mailing list
← Ahoana no hihaona ny anarana ramatoa ho an'ny fifandraisana matotra